कति छ यि बोल्ड रियालिटी टिभी स्टार किम कार्दसियनको मुल्य ? - samayapost.com
कति छ यि बोल्ड रियालिटी टिभी स्टार किम कार्दसियनको मुल्य ?
समयपोष्ट २०७६ वैशाख ३० गते १३:१५
चर्चित मोडल तथा रियालिटी टिभी स्टार किम कार्दसियनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्विर सेयर गर्दा करोडौँ कमाउछिन् ।
इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट गरेबापत १० लाख डलर (११ करोड ९ हजार रुपैयाँ) लिने गरेको अन्तराट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
यसअधि उनले ३ देखि ५ लाख डलरसम्म लिने गरेको बताइएको थियो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट समेत आम्दामी हुन थालेपछि चर्चित सेलिब्रिटीहरु यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसअघि भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले ५ करोडको हाराहारीमा रकम लिने गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
रियालिटी स्टार किमले अहिलेसम्म ६ लाख डलर लिँदै आएको उनको कम्पनीले आधिकारिक रुपमा जनाउँदै आएको छ। उनले आफ्नो माग बढाएर १० लाख डलर पुर्‍याएको र पछिल्लो समय सोही रकम लिँदै आएपछि कम्पनीले आधिकारिक रुपमै दस्तावेज अपडेट गर्न लागेको बताइएको छ।